I-Semalt ichaza indlela yokwenza i-Data Scraping Data nge Screen Screen Scraping
I-Web scraping igama elidumiweyo kwihlabathi. Ivumela ukuba siqokelele iinkcukacha ezisebenzayo kwimithombo eyahlukeneyo kwaye sincede sikhulise amashishini ethu. Kwiminyaka, i-web scrapers isetyenzisiwe ukukhipha ulwazi kumaphepha ahlukeneyo ewebhu, iikhomputha zenkcazelo, iifom ye-intanethi, ii-portals zokuhamba, iintengiso zeevenkile, kunye neevenkile zokuthenga. Isikrini sokuSonga isikrini sixhobo esitsha, kwaye awudingi naziphi na izakhono zokufunda ukuze uzuze kuyo. Esi sixhobo sikhulu kuwo amabini amabini kunye nabanikeli be-freelancers njengoko kunokukwenza lula umsebenzi wakho kwaye ukhawuleze. Iinkalo eziphambili zeTrafter Scraping zikhankanywe ngezantsi.
1. Uthelekisa amaxabiso ngokukhawuleza
NgeThuluzi lokuCoca kweSkrini, unokuqhathanisa ngokulula amanani kwiiwebhusayithi ezizithenga ezahlukeneyo ezifana ne-Amazon ne-eBay. Ikwaqokelela, iququzelele kwaye ihlolisise umgangatho wedatha yakho ngelixa ikhishwa. Ukongezelela, esi sixhobo sihlela kwaye silungise yonke imiba encinci kwaye sinceda ukuba ufinyelele ulwazi lwentengo yemveliso eyahlukeneyo.
2. Izicwangciso ze-social media sites
Abaqulunqi kunye nabaphuhlisi bahlala bekhalaza ukuba isicatshulwa esiqhelekileyo sokucima amathuluzi asikwazi ukukhipha ulwazi kwiindawo zokunxibelelana kwezentlalo. Ngokungafani nezicelo zokulahla, ithuluzi lokuCoca iSkrini lichonga idatha efanelekileyo evela kwi-Facebook kunye ne-Twitter kwaye iyayilungisa kwifomathi.
3. Ukwenza uphando lwe-intanethi lulula
Esi sixhobo sikhulu kubaphandi, ootitshala nakwabafundi kuba idibanisa idatha esuka kumaphephandaba e-intanethi nakwi-eBooks lula. Unokwenza umxholo wewebhusayithi yezemfundo eyahlukileyo kwaye uyithumele njengeyakho. Kodwa uya kufuneka unakekele imithetho ye-copyright kunye nekhontrakthi xa ukhiphe idatha esuka kumthombo we-intanethi. Ngokubanzi, esi sixhobo sinceda abafundi ukuba bafumane kwaye baququzelele ulwazi kwiziko ezahlukeneyo. Inceda ukuba balungise izabelo ezichanekileyo baze bahlasele amawaka amabini ewebhu kwiyure.
4. I-web crawler enegunya elinamandla:
Isikrini sokuSonga isikrini sisixhobo esiphezulu xa kuziwa kubhala iifayile ezahlukeneyo zewebhu. Ivumela ukuba siqalise abaqhubi abaninzi ngexesha, kwaye asiyidingi ukujonga ukuba kwenzekani ngasemva. Siza kugxininisa idatha kwaye esi sixhobo siza kugcina ulwazi oluchongiweyo kwi-database yayo. Ukongeza, ungayisebenzisa ukukhangela amaphepha ahlukeneyo ewebhu kunye nokuphucula ukusebenza kwewebhusayithi yakho. Isixhobo sokuSonga isikrini sihle kubaphathi bewebhu kwaye sibancedisa ukuphucula i-injini yokusesha yeendawo zabo kunye neeblogi.
Iinkcukacha ze-Scrape nge-Screen Scraping Tool:
Ukuze ukhululeke, nantsi inkcazo ngeenyawo malunga nendlela yokuqalisa i-web scraping nge sixhobo esilumkileyo:
Inyathelo 1: Cofa kwiSkrini sokuCoca kweSkrini kwiTeb yoyilo. Esi sixhobo siza kubona i-element ngayinye ngamanani ayo ahlukileyo.
Inyathelo 2: Kubalulekile ukukhetha indlela yokutsala kunye nefomati yedatha yakho. Ngokuqhelekileyo, isixhobo sokuCoca iSkrini sibonisa idatha kwiifom ze-CSV ne-JSON.
Inyathelo lesi-3: Cofa kwiqhosha lokuqhubeka ukuqala ukukhangela. Esi sixhobo siza kuqala siqokelele ulwazi kuwe, silungele kwaye sisifake kwifomathi efiselekayo. Ungalibali ukukhuphela idatha echongiwe kwi-hard drive yakho usebenzisa i-intanethi Source .